Burburinta Buulka Caarada. W/Q: Maxamed Nuur Shire | Somali Mirror	You need flash player
Nadwado Muqdisho loogu qabtey Odayaasha Dhaqanka. Qarax Qofkii sidey ku dhintey Muqdisho. Mu’asasada Safa oo Dowro labaad ka bilowdey Muqdisho. Mid kamid ah dhagarqabayaashii dhacay xawaaladda Kaah oo maanta lagu qabtay G/Kacyo War degdeg ah: Isuduwaha amniga gobolka Mudug oo caawa lagu dilay magaalada G/kacyo Kufsiga: Dhibaato Dan laga leeyahay!! Sh. Bashiir oo ka badbaaday qarax loo dhigay Iskoolada luqadaha sidee u hormarinaa? Qalinkii: Sh. Axmed C/samad Nadwo ku aadan isaga digiga waxyaabaha lagu halaagsamo oo ka dhacdey Muqdisho. (Sawiro) Ciidamo ka tirsan AMISOM oo Baydhabo la dajiyey Burburinta Buulka Caarada. W/Q: Maxamed Nuur Shire
Published on July 17, 2012 by SomaliMirror · 1 Comment · Mahad oo dhan ilaahay ayey u sugnaatay, nabad galyo iyo naxariisna ha ‘ahaato nabigeena dushiisa (SCW).
Inta aanan u guda gelin qormadaan Burburinta Buulka Caarada, waxaan in yar ka bidhaaminayaa cinwaanka qormada:
Buul-Caaro, wax guri laga dhigto isagaa u liita, maxaa yeelay, Qorax, Dhaxan, Roob iyo Cadow midna kaama difaaci karo.
“Haddii Buulka Caaradu sidaas u liito maxaa loo burburinayaa, maa Aayar la xaaqo” ? waa su’aal maskaxda Aqrisyaha Maqaalkan ku soo dhici karta. jawaabta su’aashaas oo ay sheeko la socotana iga hoo.
Muddo markay arrintu sidaas ahayd ayaa maalin maalmaha ka mid ah ninkii xanuunsayey oo ardaa jiifa waxa u yimi nin safar ah. Markay iswareysteen ayaa ninkii safarka ahaa yiri “Aniga ayaa xanuunka dawadiisa aqaan ee ha la ii keeno caano geel oo dhay lis ah iyo caleenta geedka jaleelada”.
Makhrib markay noqotay ayaa ninkii safarka ahaa dab shiday oo digsi loo keenay ku kariyey caleentii geedka. Markay in door ah ay kartay ayuu biyihii oo uu ka miiray caleentii intuu ku daray caanihii dhayda ahaa cabsiiyey ninkii xanuunsanayey. Mantag ayaa soo dhaafay ninkii xanuunsanayey. Markuu in badan mantagay ayuu ninkii safarka ahaa ku yiri ninkii xanuunsanayey ” halkan bal eeg; waxaan aad mantagtay waa maxay?” Ninkii xanuunsanayey baa eegay mise waa Bahalkii uu moodayey inuu liqay oo ku dhex jira mantaggii. Markaas ayuu weydiiyey ” oo ma anigaa Bahalkan mantagay?” Ninkii kale ayaa ugu jawaabay ” haa”.Maalintaas ayaa xanuunkii ugu dambaysay ninkii. hadde ogow, ninka waxa uu Mantagay waa caleenta geedkii la cabsiiyey, balse wixii uu aaminsanaa ayaa la rabay in loo raaco, si shakiga uga baxo.
Qofka in arrin uu wax weyn u maleeyo laga kala daadiyo, way uga xanuun badan tahay in wax sahlan oo uu karkaran karo laga kala daadiyo. taasoo jirta, ayaa haddana qofka kale ee wax naqdinaya ay macno badan u sameyneysaa inuu waqti iyo maskax badan geliyo waxa uu wax ku naqdinayo. halkaan haddii aan iftiimiyana, waxaan ka wadaa aniga ” wax naqdinaya” iyo C/waaxid ” kan la naqdinayo” waxaa noo fiican in waxa uu dhistay anna aan daba socdo ay yihiin wax weyn, si’ isagana nin wax weyn lagu naqdinayo uu ugu ekaado, anna aan xanuun u-dareensiiyo ileen waxaan u soo tafa-xeytay inaan meel saaree..
Isha maqaalkan: Somalireal.com
Waxaan uga gol lahaa. 2-aad. W/Q: Maxamed Nuur Shire.
Mujaahidiinta Fadhi ku-dirirka. W/Q: Maxamed Nuur Shire
Alla Sheekadu macaanaa. W/Q: Maxamed Nuur Shire
Is-fahmi waaye ee aan u kala ergeyno. W/Q: Maxamed Nuur Shire.
Al-Shabaab,Towxiidka, Shareecada iyo Muslimiinta. W/Q: Maxamed Nuur Shire
mohamed says:	August 4, 2012 at 7:32 pm	labadiinuba waad khasaarteen oo cadow baad isku noqoten halkaasna waxaa kulumay midnimadii muslimiinta iyocadowgii oo
guul gaadhey la hubo oo dhan walba ah
jiritaankii soomaaliyana haddaan ilaahay badbaadin meesha wuu kabaxayaa
laba nasiib daran bad tihiin
RelatedWaxaan uga gol lahaa. 2-aad. W/Q: Maxamed Nuur Shire.Mujaahidiinta Fadhi ku-dirirka. W/Q: Maxamed Nuur ShireAlla Sheekadu macaanaa. W/Q: Maxamed Nuur ShireIs-fahmi waaye ee aan u kala ergeyno. W/Q: Maxamed Nuur Shire.Al-Shabaab,Towxiidka, Shareecada iyo Muslimiinta. W/Q: Maxamed Nuur ShireLatest Headlines